कस्तो छ भर्खरै चीनमा सार्वजनिक भएको ह्वावे वाच३ सिरिज? कहिले आउला नेपालमा? - Technology Khabar
» कस्तो छ भर्खरै चीनमा सार्वजनिक भएको ह्वावे वाच३ सिरिज? कहिले आउला नेपालमा?
कस्तो छ भर्खरै चीनमा सार्वजनिक भएको ह्वावे वाच३ सिरिज? कहिले आउला नेपालमा?
ह्वावेले आफ्नो पूर्णरुपको स्मार्टवाच जीटी सिरिज सार्वजनिक गरेको लगभग ४ वर्ष भयो। ४ वर्षपछि अब भनेक कम्पनीले आफ्नै नयाँ अपरेटिङ सिस्टम तथा आधुनिक फिचरहरुसहितको वाच ३ सिरिज ल्याएको छ।
बुधबारको हार्मोनीओएस इभेन्टमा सार्वजनिक गरिएकामध्ये यो डिभाइसले पनि यूजरहरुको ध्यान आकर्षण गर्ने कम्पनीको अपेक्षा छ।
यसका दुई ओटा मोडल छन्- ह्वावे वाच ३ र ह्वावे वाच ३ प्रो। ह्वावे वाच ३ प्रोमा वाच ३ को भन्दा फरक मेटेरियल र बढी क्षमताको ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ।
यसमा पनी नछिर्ने थ्रीडी रोटेटिङ क्राउन दिइएको जसले यूआई नेचिगेट गर्न अझ सहज बनाउने कम्पनीको भनाइ छ। यसलाई साधारण टचस्क्रीनको दाँजोमा चिसो वा पञ्जा लगाएको हातले चलाउन सकिन्छ।
यसको १.४३ इन्चको एमोलेड डिस्प्लेमा रहेको बेजल यसअघिका स्मार्टवाचमा भन्दा पातलो बनाइएको छ। यसको पिक्सेल डेन्सिटी ३२६ रहेकाले यो निकै चम्किलो रहने कम्पनीको दावी छ।
यसमा पानी छिर्दैन भने स्ट्र्याप बाहेक यसको तोल ५४ ग्रामको छ। ह्वावेले वाच ३ लाई सिलिकन स्ट्र्याप भएको एक्टिभ, लेदर स्ट्र्याप भएको क्लासिक, धातुको ब्याण्ड भएको एलिट तथा मिलानेजको ब्याण्ड भएको क्लासिक गरि थुप्रै डिजाइनमा उपलब्ध गराएको छ।
यसमा ब्लड अक्सिजन सेन्सर तथा छालाको तापक्रम थाहा पाउने सेन्सर रहेको छ भने स्ट्स र स्लिप ट्रयाकिङ फिचर पनि राखिएको छ।
ई-सिम सपोर्ट गर्ने भएकाले यसलाई स्मार्टफोनसँग कनेक्ट नगरी फोन गर्न, उठाउन तथा ह्वावे म्युजिक स्ट्रिम गर्न सकिन्छ।
ह्वावेले वाच ३ सिरिजका लागि एप ग्यालरी ल्याएको छ जसबाट सोझै स्मार्टवाचमा हार्मोनीओएस इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यसमा ह्वावेले चिपसेटका बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन भने दुवै भेरियन्टमा २ जीबी र्याम र २६ जीबी आन्तरिक स्टोरेज दिइएको छ।
नेपालमा आउला त?
सामान्यतया ह्वावेले विश्व बजारका लागि निकालेका अधिकांश स्मार्टफोन तथा अन्य डिभाइस नेपालमा पनि आउने गर्दछ। नेपालमा ह्वावेको आधिकारिक कार्यालय भएका कारण पनि यो डिभाइस नेपालमा आउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तर ह्वावेरले तत्काल चीनबाहिर कहिले र कुन मूल्यमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा नखुलाएकोले नेपालमा आउला या नआउला, आए कहिलेतिर आउला र यसमको मूल्य कस्तो रहला भन्ने तत्कालका लागि जिज्ञासामा नै सीमित रहेको छ।